Maitiro ekuwedzera zvinyorwa zvidiki otomatiki muPlex | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera zvinyorwa zvidiki otomatiki muPlex
IPad nhau | | Apple tv, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kuuya kwePlex kuApple TV kwave shanduko kune avo vedu vaimbove nekushandisa dzimwe nzira dzekugona kuona raibhurari yedu yemultimedia paterevhizheni. Kutenda iko kunyorera kwatinotova nako muApp Store yeiyo yechina chizvarwa Apple TV, hazvingagone kuve nyore kutarisa edu mafirimu uye nhevedzano zvakanaka kubva pasofa yekutandarira. Asi haisi chete iyo inounza raibhurari yedu ine ruzivo rwakakura, mabutiro, vatambi, zvinyorwa uye kunyangwe mataera emafirimu, inotibvumidza kuti tiwedzere kunakidza mashandiro sekuita zvinyorwa zvidiki zvezvikamu uye mafirimu kuti atorwe otomatiki kukwanisa kunakidzwa navo mushanduro yavo yepakutanga nekunyaradza kwakazara. Isu tinotsanangura nhanho nhanho maitiro ekuzviita.
1 Gadzira account kuOpenSubtitles.org
2 Shandisa iyo OpenSubtitles plugin muPlex
Gadzira account kuOpenSubtitles.org
Ndiyo danho rekutanga, zvinongoda mashoma masekonzi enguva yako uye mahara. Enda ku www.opensubtitles.org y gadzira yemahara account iyo yatinozoshandisa yePlex kurodha zvinyorwa zvidiki kubva papeji iro. Kana izvi zvaitwa iwe unogona kuenderera nhanho inotevera.
Shandisa iyo OpenSubtitles plugin muPlex
Zviri pachena unofanirwa kunge uine iyo Plex Media Server application yakaiswa pakombuta yako uye ndatowedzera raibhurari yako yemultimedia, iri nyore. Rega Plex dhawunirodha zvese zvirimo kubva padandemutande (mabutiro, mazita, kukanda…), gadzirisa zvisirizvo zvisungo zvayakange iine uye kana raibhurari yako iri mumamiriro akakwana wobva waenderera mberi nehurongwa hwekuwedzera zvinyorwa zvidiki.
Vhura "Media Manager" muPlex wobva wadzvanya pagiya kuruboshwe (museve), wobva wasarudza sarudzo "Zvirongwa" uye pasi pe "Server> MaAgents" sarudza "Televhizheni Series> Iyo TVDB", tarisa "OpenSubtitles.org" sarudzo yekuimisa. Dzvanya pamitsara mitatu yakatwasuka kuruboshwe kweOpensubtitles uye woiisa munzvimbo yekutanga yeiyo runyorwa. Zvino tinya pane giya vhiri kurudyi.
Iwe unozofanirwa kuisa yako yekuwana data kuaccount yawakagadzira mudanho rekutanga yedzidziso iyi uye sarudza zvinyorwa zvidiki zvaunoda kutorwa pasi otomatiki. Iwe une matatu anoteedzera aunogona kurodha pasi, kunyangwe iwe usingafanire kusarudza ese matatu.
Dzvanya paSave kana zvese zvanyatsogadziriswa uye nekuvhara browser. Vhurazve "Media Manager" uye gadziridza zvirimo muraibhurari. Zvichienderana nesaizi yeraibhurari, zvinogona kutora zvakawanda kana zvishoma kudhawunirodha ese ma subtitles. Kana iwe uchida kuzviita futi nemamuvhi, dzokorora iwo mamwe matanho asi mukati me "Mafirimu" menyu.
Iwe hauchazofaniri kunetseka nezvekutsvaga mawebhusaiti kudhawunirodha zvinyorwa zvidiki kana kuita mamwe mazita kuti aenderane nevhidhiyo faira, kana kuwedzera iwo kuraibhurari yako. Plex inozotarisira zvese izvi iwe uye unogona zvakare kuzviona pane yako iPhone, iPad kana Apple TV Hapana dambudziko. Chinhu chepamusoro chevadi veakateedzera mune yekutanga vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuwedzera zvinyorwa zvidiki otomatiki muPlex
chinyorwa chakanaka, kunyange ini ndisina kurasikirwa nechinhu.
Miguel Angel Albertos akadaro
Ini handisi kuwana chero chinhu pasi zvakare
Pindura Miguel Angel Albertos
Apple Bhadhara setup gwaro
Apple Watch inoshanda chete nemajaja ayo akasimbiswa